Ihe niile I Kwesịrị Ịmara Banyere Dianabol Powder Maka Sale
/blog/Dianabol , gallery/Ihe niile I Kwesịrị Ịmara Banyere Dianabol Powder Maka Sale
Ihe na 12 / 27 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na Dianabol, gallery.
Ị na-achọ ịkwalite ahụ ike gị, na-amalite ịmalite ha ma ọ bụ na-enwe ọganihu bara ụba? Dianabol (methandrostenolone) ntụ ntụ kwesịrị ịbụ ihe ọzọ dị mkpa. Chọpụta ihe ị chọrọ ịma banyere ndị a anabolic steroid, ojiji, irè, na otu esi agafe mmetụta dị n'akụkụ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-arụ ọrụ siri ike, ị ga-aghọta nke ọma mgba nke ịchọta oke ahụ ike. Ịbanye na mgbatị ahụ ma na-eme mgbakọ ndị ahụ dị egwu dịka ọhụụ ma ọ bụ lunges nwere ike ọ gaghị ezuru gị iji mee ka ahụ gị dịrị.
Ịrụ ọrụ nwere uru ahụ ike, mana ọ chọrọ kacha ntachi obi, nhazi na oge. Echere m, ị nwere ike ọ bụghị nanị imega ahụ maka otu izu, chọpụta onwe gị site na enyo, ma na-atụ anya ịhụ ahụ ike ụbụrụ. Otú ọ dị, ị nwere ike ime ihe amamihe site na ịgbakwunye ihe ị na-eme site na ọgwụ ndị anabolic a kwadoro, nke ga-eme ka ahụ gị dịkwuo n'ime ụbọchị asaa.
Kedu ihe bụ Dianabol (Methandrostenolone) Powder?
Nkọwa nke Dianabol Powder
Raw Dianabol bụ chemical na CAS no. (72-63-9), nke ndị klas C17 anabolic steroid. Ọ bụ ọgwụ siri ike nke sịntetị nke nweela ihe ngosi kemgbe 1950 si. Ọgwụ ọjọọ bụ uru ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu na-achọ ịnọgide na-enwe ahụ ike ha ma mee ka ike ha dịkwuo mkpirikpi.
A maara ọrịa steeti Anabolic dị ka hepatoxic. Iji belata mmetụta a, ndị mmepe nke Dianabol tinyere otu methyl n'otu 17th ọnọdụ nke carbon. A na-agbakwunye nkekọ abụọ na ọnọdụ nke mbụ na nke abụọ nke amị carbon iji belata mmetụta ndị na-eme ka androgenic dị ka ihe otutu ma ọ bụ nwoke.
Ihe kachasị iwebata maka Megestrol acetate ntụ ntụ
N'adịghị ka ndị ọzọ steroid, Dianabol protein ntụ ntụ na-ekwe omume na ọtụtụ mba. Otú ọ dị, ọgwụ ahụ bụ usoro usoro III nke na-achịkwa ihe dị mkpa na ọ ga-adị na ndenye ọgwụ, karịsịa na US
Ọbụna mgbe Agha Ụwa nke Abụọ gasịrị, ndị America na Soviet Union nọ na-asọ asọ mgbe nile ma na-achọ ilepụ onwe ha anya n'echiche. Ọ bụ ezie na ha abụọ na-etinye aka n'agha ahụ n'ezie, ha na-enwe nchegbu site n'igbu ibe ha egwuregwu na ịwa ọwa ọnwa.
N'agbata 1940 na 50, ndị Russia chịrị egwuregwu Olympic, n'ihi ọrụ testosterone ndị na-eme egwuregwu na-eji. Otú ọ dị, ihe nzuzo a dị mkpụmkpụ mgbe ahụ mgbe US. Olimpik Olympic, John Ziegler, chọpụtara ihe aghụghọ ahụ. N'ịchọ ka Soviet Union pụta, o jikọtara ya na Ciba Pharmaceuticals iji nweta ngwaahịa yiri ya.
Dianabol (methandrostenolone) ntụ ntụ malitere na njedebe 1950s. Ọ bụ ihe a ma ama n'etiti 1960s na '70s dịka nhọrọ zuru oke na-arụ ọrụ nke steroid.
N'adịghị ka ndị gara aga, ọgwụ a bụ ụbụrụ anabolic na mbụ na ahịa. Ebumnuche nke ọgwụ a bụ iji mee ka ndị na-eme egwuregwu kwụsị ịṅụ ọgwụ ọjọọ. Ọ na - enwe mmetụta dị ala androgenic ma dị site na ndenye ọgwụ na ọtụtụ mba. D-bol dị okpukpu abụọ karịa testosterone.
Chemical and Characteristics of Dianabol Powder
Aha aha 17a-methyl, 17b-hydroxy, 1,1-androstadienone, 3-otu
CAS ọ dịghị. 72-63-9
Ebe na-agbaze (Celsius C) 163 - 167
molekụla ibu 300.442 g / mol
molekụla usoro C20H28O2
Solubility Mmiri (9.7 mg / L na 25 ° C)
ojiji Na-eme ka mmụba dị na oke ahụ ike
Ngwa na ahia aha Dianabol
Rịghachite-b · Dehydromethyltestosterone
Otu esi esi zụta Dianabol (methandrostenolone) Powder Online
Ịzụta ọgwụ steroid na-adabere n'ihe ole na ole. Ọnọdụ gị nwere ọrụ dị mkpa ebe ọ bụ na ụfọdụ mba ejirila mmachibido iwu ịzụta, ihe onwunwe, na ojiji nke Dianabol ntụ ntụ. Dịka ọmụmaatụ, ojiji nke methandrostenolone na mmepụta ya bụ iwu na-akwadoghị na United States, Australia, na Canada, ọ gwụla ma ọ bụrụ na edeghị akwụkwọ iwu. Otú ọ dị, ná mba ndị ọzọ dị ka Mexico, Dianabol ntụ ntụ zụrụ dị mfe dị ka ịzụta otu sneakers.
Ịzụta Dianabol n'ụzọ ziri ezi
D-bol nwere ike ịbụ ọgwụ na-egbochi gị na steeti, ma ị ka nwere ike ịzụta iwu sitere na ikikere Dianabol ntụ ntụ emeputa. Ka m kọwaa ya. Ọ bụrụ na ịnweghị iwu ọgwụ n'aka onye dọkịta, uche gị ga-adịcha ka ị pịa ahịa ojii. Ọfọn, ndị ahịa ahụ nwere ike ịdị na-eji ọnụ ụzọ azụ eme ihe dị oke mma, ma ọ ga-abụ na ị ga-adaba na ọgwụ ọjọọ, na-enweghị atụ, na ọgwụ ọjọọ.
Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya ịkwaga na steeti nke nyere iwu maka iji steroid, ị ka nwere ike ịkwado Dianabol na-echekwa ịntanetị. Ma ọ dịkarịa ala, ị meelarịrị ngwaahịa dị elu nke e mepụtara n'okpuru ọnọdụ egwu na usoro.
Dianabol ntụ ntụ maka ere
Ndị na-ere ihe n'Ịntanet dị iche iche na-enye ndị steroid maka ana-ere ahịa. Ebe ọ bụ na ụlọ ahịa China na-ejupụta na mmiri, ị nwere ike rummage gburugburu maka Dianabol ntụ ntụ China, karịsịa na nnukwu ịzụrụ. Iji chọpụta onye a pụrụ ịdabere na ya, tụlee isi edepụtara, mgbanwe mgbanwe ụgbọ njem, na nnweta ozi dị mkpa na saịtị ahụ.
Nzọụkwụ nke Dianabol ntụ ntụ online ịzụta:
Gaa na https://www.proanabolics.com/ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nwere ike ịdabere na Dianabol ngwungwu ụlọ nrụpụta dị ka nke a Ụlọ ahịa China.
Pịa na nchọta ọchụchọ, pịnyere "Dianabol," ma chọọ ihe
A ga-akpali gị ịdebanye aha akaụntụ maka nyocha ngwa ngwa nke ngwaahịa ahụ n'oge mbupu. Otú ọ dị, ịnwere ike ịhọrọ ịlele dị ka ọbịa.
Nye nkọwa nke akaụntụ gị
Kwenye usoro ahụ ma chere maka ịnyefe nri na ọnụ ụzọ gị.
Rịba ama na Dianabol ntụ ntụ ọnụahịa dịgasị iche site na onye na-ere ahịa na onye ọzọ na nnukwu ị na-azụ.
Otu esi eme Dianabol na ulo
Dịka i nwere ike ịzụta steroid, ị nwere ike ịzụta ihe dị iche iche dị iche iche wee bịa na Dianabol ntụ ntụ. Usoro a bara uru n'ihi na ọ bara uru ma ntụgharị a na-enye gị ohere ịhazi usoro ahụ na mmekọrita gị.
E nwere ihe nchịkọta nke okpukpu ise Dianabol, nke dị iche iche dị ka ihe ndị e ji eme ihe na usoro onunu.
Methandrostenolone ntụ ntụ
Benzyl mmanya na-egbu egbu (BA)
Akwa iko vidio
Sringe na sụgharịa sringe sterile
Ka anyị tụlee nkọwa banyere otu esi eme Dianabol n'ụlọ;
D-bol ntụ 1g 20G ma obu 17.86ml 20G ma obu 17.86ml 5G ma obu 5.6ml 2.5G ma obu 2.23ml
Mkpụrụ vaịn 5.0ml 182.14ml 157.14ml 29.4ml Jiri mmanu uhie kama (31.77ml)
N'ozuzu, Dbol ntụ ntụ na-atọ ụtọ, ma ihe ndị dị n'elu ga-eme ka ekpomeekpo ahụ kwụsị.
Kedu Dianabol (D-bol) Na-arụ ọrụ
Dianabol ntụ ntụ na-egbochi uru ahụ ka ọ ghara ịda mbà ma na-eme ka njikọ nke ndị na-edozi ahụ na-amụba ma na-arịwanye elu na nitrogen. Ngwurugwu a ga - eme ka ahụ gị nwee ike itinye uche gị na protein niile ahụ. N'ihi ndụ ndụ ya dị mkpirikpi, ị ga-amalite ịhụ ụfọdụ ndebanye aha mgbanwe dị n'ime ụbọchị 7 - 10.
The steroid na-eme ka onye ọrụ ahụ agụụ, ike, na ọnọdụ.
Dianabol (D-bol) Ọkara ndụ
Dbol nwere nkezi ọkara ndụ nke 4 awa. N'iburu n'uche na oge ahụ dị mkpụmkpụ, ọ ga-adị mkpa ka ị kewaa nkewa n'ogologo ụbọchị iji nọgide na-arụ ọrụ ọbara.
Oge Dianabol Detection
A ga-achọpụta steroid ahụ ruo izu isii site na mgbe ị gachara. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ọsọ, ị kwesịrị ịkwụsị ịnweta Dianabol ọnwa abụọ tupu ule ahụ.
Dianabol Results: Gịnị ka m ga-enweta?
Anabolic steroid na-arụ ọrụ site na ịmalite usoro catabolic na ụba protein anabolism. Maka bodybuilders, ị ga-enwe ike inweta ahụ ike ka mma mgbe ị na-arụ ọrụ. Ọ bụ ezie na Dianabol nwere ike ọ gaghị enye gị ọdịdị vascular, ọ ga-ọ dịkarịa ala mụbaa uru gị ma mee ka ị dịkwuo mma karịa oge.
N'ebe ndị mgbatị ahụ, Dianabol steroid bụ ihe kachasị mma iji mee ka ike gị dịkwuo ike ma nye gị ume iji nagide nrụgide ndị siri ike. Ọgwụ ahụ na-eme ka oge mgbake ahụ dị ngwa ma n'otu oge ahụ na-ebelata ike ọgwụgwụ.
Methandrostenolone bụ ọgwụ kachasị mma maka ndị ọrịa nwere nsogbu n'inweta ma ọ bụ ịnọgide na-enwe ahụ ike dị mma. Ngwaahịa a nwere ike ime ka ị gbakwunye 20 pound n'ime izu ole na ole.
Nyocha nke Testosterone
Ọ bụrụ na ị na - arịa ụbụrụ testosterone dị ala, dọkịta gị nwere ike ịdebe steroid dịka Dbol.
Ịba ụba na njigide nitrogen ma na-arụzi anụ ahụ, karịsịa mgbe ịkpụchasị akpụkpọ anụ, ịwa ahụ, ma ọ bụ ọkụ. Tụkwasị na nke ahụ, a na-eji Dianabol maka ịgwọ ụdị anemia.
Dianabol (D-bol) Ụdị na iji (Ọ bụ Nchekwa iji Dianabol?)
Ụdị Ụdị Dbol na-agbaso n'etiti 15 na 50mg / ụbọchị. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị ọrụ nwere ahụmahụ ga-eji ihe dị ka 100mg kwa ụbọchị. Isi ihe kachasị mkpa iji rịba ama bụ na usoro dị elu nke steroid ga-emetụta ọbara ọbara gị.
Ụmụ nwanyị na ndị ọhụrụ agaghị ewere ihe karịa 15mg. Maka ụmụ nwanyị na-eme egwuregwu, usoro kachasị elu kwa ụbọchị bụ 30mg. Ihe ọ bụla dị elu karịa nke a nwere ike ibute mmụba na àgwà nwoke na nwanyị na mmetụta ndị ọzọ dbol na-enweghị ike ịgbanwe.
Dbol nwere obere ndụ, n'ihi ya, ọ dị mkpa ka ị kewaa 2 - 3 ugboro ugboro n'ụbọchị. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịṅụ ọgwụ n'oge oge nri iji belata mmetụta ndị nkịtị dị ka ọgbụgbọ. Otu ụzọ doro anya iji mee ka Dianabol bụrụ bioavailability bụ site n'ịmepụta mkpụrụ osisi na nri gị.
Dbol bụ onye mbụ anabolic steroid nke a pụrụ iji ọnụ kwuo. Ọ bụ ezie na ịṅụ ọgwụ dị mma ma were ya dị ka mbadamba, ị nwere ike ịhazi ya site na ntinye nke intramuscular. Maka nsonaazụ kachasị mma, ị ga-ejide Dianabol stack site na iji steroid ndị ọzọ dị ka Durabolin, testosterone, Primobolan, ma ọ bụ trenbolone.
Ụdị Dianabol dịkarịsịrị dị n'etiti izu anọ na izu isii na ụdị 30 - 50mg. N'ime oge ahụ, jide n'aka na ị na-atụnye steroid na ọgwụ kwa ụbọchị na cardinal na N2guard maka igbochi imebi imeju. Onye ozo kwesiri ijide onwe ya iji gbochie njiko, nke bu maka etiti nke estrogen na ijigide mmiri.
Dianabol nsonaazụ na-ahụkarị n'ime izu mbụ n'iwe ya. Nke a bụ atụmatụ banyere oke arọ ị nwere ike inweta site n'ozuzu ya;
Oge (izu) Nkume (pound)
Post Cycle Agwọ
Ná ngwụsị nke izu isii ahụ, ọ dị mkpa ịtụle usoro ọgwụgwọ na-aga n'ihu iji zere mmetọ hormone na glands pituitary. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọkpụkpụ ahụ ga-ebelata ọkwa nke testosterone. Ya mere, a na-eche gị ka ị hụ na ọkwa ahụ laghachiri na nkịtị ka ị ghara ịhapụ ngwongwo muscle ị kwakọbara. Ọgwụgwọ ahụ na-adị ruo izu anọ.
Dianabol (D-bol) Ihe na-emetụta ya: Otu esi zere mmetụta n'akụkụ
Dinobol steroid bụ uru nanị ma ọ bụrụ na i jiri ya mee ihe n'ụzọ amamihe mgbe ị na-atụle nchebe na ihe ize ndụ dị. Ka ị na - emekwu usoro onu ogugu, nke kachasị elu ka ị ga - enwe mmetụta dị egwu.
Idebe mmiri ma ọ bụ igbochi
Enukwu nke prostate
Ntuchi nke pituitary gland
Ụdị ntutu dị njọ
Nlekọta ihe eji eme nke nwoke
Mmebi nke imeju
Nje Virilization ma ọ bụ nwoke na nwoke ma ọ bụ nwanyị na-enwe mmekọahụ dị ka ụda olu dị mma, ọdịdị dị njọ nke ntutu isi, ma ọ bụ ịmalite ịba ụba.
Ọganihu nke ajọ LDL cholesterol na ọnụ na ezi cholesterol dị mma
Esi zere ma jikwaa mmetụta Dianabol
Jiri onye aromatase inhibitor ma obu estrogen
Dbol nwere ọchịchọ nke ikpobata n'ime estrogen. Mgbe oke hormone a dị na ahụ, ihe ndị a na - arụ bụ njigide mmiri, bloating, infertility, gynecomastia, ma ọ bụ ịda mbà n'obi.
Ozi ọma ahụ bụ na ị nwere ike iji onye na-eme ihe aromatase gbochie ntụgharị nke dbol ka estrogen. Ụfọdụ ihe atụ gụnyere letrozole, Aromasin, na Arimidex. Jide n'aka na ị na-ewere ihe ndị a n'oge oge Dianabol na mgbatị usoro mgbakọ.
Ihe mgbakwunye ọrịa ime ahụ
Ngwunye kachasị mma ga-ebelata ụkwara nchịkwa nke imeju site na ibelata mmebi nke oxidative. Ọ bụrụ na o nwere mmiri ara ehi skelet, NAC, TUDCA, n'etiti ihe ndị ọzọ bara ọgaranya, nke ahụ pụtara na ọ dabara ụgwọ ahụ.
Ikwesiri iwere Dianabol na njikọ nke mineral nke na-emezi ọkwa cholesterol. Ụfọdụ n'ime mgbakwunye ndị a na-agụnye osikapa na-acha uhie uhie, osikapa mmanụ, niacin, ma ọ bụ co-enzyme Q10.
Ọtụtụ mgbe, ụbụrụ testosterone nke ahụ na-emepụta agaghị ezu n'oge mgbanwo Dbol. Ọ bụrụ na ọkwa dị ala, usoro nsị ahụ ga-akwụsịkwa. Ya mere, ịkwado ihe mgbakwunye testosterone na Dianabol ga-enyere gị aka imezu ihe mgbaru ọsọ gị.
Lelee nri gị
Were nri bara uru nke omega acids na protein na-edozi ahụ. Nri nnukwu abụba bụ isi ihe kpatara njigide mmiri, ya mere, mmụba nke ọbara mgbali elu.
Were obere na-edozi doses
Ndị mbido agaghị agafe ihe na 20mg / ụbọchị. Ọ bụ ezie na ndị na-ahụ maka ihe ndị na-ewu ewu ga-etinye aka na 100mg nke steroid, omume ahụ adịghị mma. Ọ bụrụ na ị ga-eme ka ọtụtụ abawanye, 50mg dị mma. Nnukwu usoro onu ogugu na-emetụta nnukwu mmetụta dị ka elu nke ọbara mgbali elu.
Rịba ama na mmechi Dianabol ga-adị n'etiti izu isii na asatọ.
Ụmụaka, ụmụaka, ma ọ bụ onye ọ bụla tọrọ karịa afọ 30
Na ụmụaka, na-ewere Dianabol ga-egbochi ọkpụkpụ ọkpụkpụ na mmekorita mmekọahụ.
Ụmụ nwanyị nwere mmuta
Onye steroid nwere ike iduga ụbụrụ nwa ebu n'afọ
Ara na ọrịa cancer na-arịa ọrịa prostate
Nnukwu Nkume Na-enweta
Ị ga-amalite ịhụ mmetụta ahụ ozugbo ị malitere usoro onunu ogwu. I kwesịdịghị iji tụnyere Dianabol n'ihu na mgbe foto ga-ahụ ihe dị iche. Mgbe izu mbụ gasịrị, ahụ gị ga-apụta dịkwuo oke, ị ga-enwetakwa uru dị arọ.
Mgbe ị na-emega ahụ n'ụlọ mgbatị ahụ, ị ​​ga-enwe ume zuru ezu iji mee mgbatị siri ike ma ọ bụ ibuli ibu arọ. Na njedebe nke usoro ahụ, ị ​​ga-enweta ihe dị nso na 20lbs.
Na-eme ka mmepụta nke ụmụ mmadụ pụta
Nke a bụ otu n'ime ndị ole na ole ndị steroid iwu nke na-akwalite hormone growth. Ọ bụrụ na ijikọta Dianabol stack na nri dị mma ma na-arụ ọrụ mgbe nile, steroid na-arụ ọrụ anwansi. Ọ bụ ezie na ịnweta oke ezi uche, anụ ahụ gị na-ebelata.
Ọtụtụ steroid maka ire ere bụ injectable. Otú ọ dị, Dianabol na-eji ọnụ ekwu okwu site na mkpụrụ ọgwụ, mbadamba, capsules, ma ọ bụ n'ụdị mmiri. I nwekwara ike ime Dianabol uzo uzommeputa ma hazie usoro onunu ogwu.
Mmetụta dị egwu dbol kasị njọ bụ ọbara mgbali elu, mmebi imeju, na gynecomastia. Eziokwu ahụ na obi gị na-aghọ ihe omimi n'ụzọ zuru ezu na ihe na-erughị otu izu nwere ike ịdọrọ. Ị nwere ike ijikwa ihe ndị ọzọ na-emetụta site n'ịhụ ịdọ aka ná ntị na ịgbaso ntuziaka, mana gynecomastia enweghị ike ịchịkwa.
Mmetụta ndị ọzọ na - eme ka ndị bodybuilders kwụsị ọgwụ a bụ ohere nke infertility, nsogbu obi, na imebi imeju.
Mgbe ị na-anụ banyere steroid nke anabolic, ọtụtụ ajụjụ ga-agba ọsọ n'uche gị. "Ndi Dianabol iwu?","Enwere m ike ịnweta dose na-enweghị ezigbo ọgwụ ederede?","Kedu mgbe e mepụtara ndị steroid?"Na ajụjụ ndị yiri ya. Ihe edere n'elu nwere azịza niile ị na-agbalị ịchọta.
Dbol maka ire ere bụ ebe niile n'etiti 1960 na 1970 steroid nke oge ozubu. Otú ọ dị, mmetụta ya mere ka FDA gụpụta ya dị ka ihe akụrụngwa nke klas III ma kpachapụ ya anya. Na United States, Dianabol dị naanị site na ndenye ọgwụ.
The Top 10 testosterone ester: nke dị mma maka gị?	Oxymetholone na-ekwu: The Ultimate Guide of Oxymetholone (Anadrol)